Imifuno ekhawulezileyo yemifuno efektri - China iMveliso yoTyalo oluKhawulezayo oluKhawulezayo abavelisi, abaxhasi
Intshayelelo yemveliso Bhalisa isiseko sempahla eluhlaza, sebenzisa itswele elityheli. Faka isicelo ijelo elilungele ukulungiswa kokutya, indawo yokutyela kunye namanye amashishini. Conditions Iimeko zokugcina zingagcinwa kakuhle ngaphantsi kwe -18 people Abantu abaninzi bacinga ukuba ukutya okutyiweyo akunampilo, ngoko ke bacinga ukuba imifuno efriziwe ayisiyonto intsha kwaye inesondlo njengemifuno eqhelekileyo. Nangona kunjalo, uphando lwamva nje lubonisa ukuba ixabiso lesondlo kwimifuno ekhenkcezisiweyo liphezulu kunemifuno eqhelekileyo ...
Intshayelelo yemveliso Ukurekhoda izinto ezisisiseko, ikakhulu iitapile zenyama emhlophe. Ukucaciswa kwemveliso 10mm, 15mm, 17mm, Randomcut3.5g / 6g / 7g Iimpawu zeMveliso Faka itshaneli Ilungele ukulungiswa kokutya, ikhonkco lokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zokugcina ugcino lwendawo engezantsi -18, Inkqubo yokuqandisa kwangoko. Inkqubo ye-CAS yokumisa yindibaniselwano yentsimbi enamandla kunye ne-static magnetic field, ekhupha amandla amancinci eludongeni ukwenza iimolekyuli zamanzi ...
Intshayelelo yemveliso Izinto zokwenza imveliso evela kwisiseko serekhodi yemifuno. Ukucaciswa kwemveliso Sika ubungakanani5mm, 10mm Iimpawu zeMveliso Faka itshaneli Ilungele ukulungiswa kokutya, ikhonkco lokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zokugcina ugcino lwendawo engezantsi -18, Inkqubo yokuqandisa kwangoko. Inkqubo ye-CAS yokuqandanisa yindibaniselwano yamandla ombane kunye ne-static magnetic field, ekhupha amandla amancinci eludongeni ukwenza iimolekyuli zamanzi kukutya okuncinci kunye neyunifomu, kwaye ...
Ukwaziswa kwemveliso Ukusuka kwirekhodi, ukusetyenziswa kweendidi ezintathu zomnqatha obomvu eJapan, imibala eqaqambileyo, isango elimnandi. imigaqo Ukuchwetheza, ukukrola, isilayi. Yamkela iimpawu zeMveliso yesiqhelo Faka itshaneli efanelekileyo Ukulungiswa kokutya, ikhonkco lokutyela kunye namanye amashishini. Iimeko zoGcino Ukugcinwa okungaphantsi kwe -18, Inkqubo yokuqandisa kwangoko. Inkqubo ye-CAS yokumisa yindibaniselwano yentsimbi enamandla kunye ne-static magnetic field, ekhupha amandla amancinci ...